Maxaad Kalasocota Casriyeenta lagu sameyeey Hoolkii Xarunta Barlamaanka Puntland (Sawiro) | All idamaale News
Maxaad Kalasocota Casriyeenta lagu sameyeey Hoolkii Xarunta Barlamaanka Puntland (Sawiro)
Hay,ada Cilmi Baarista Puntland u qaabilsan ee UNDP ayaa magaalada Garowe waxay dib u habayn kusamaysay xarunta Baarlamanka Puntland taas oo in kabadan 19 Sanno aan wax laga qaban dib u dayac tirkeeda.
Madaxa Hormarinta Qaramada diboobay u qaabilsan UNDP Puntland Mudane Sayid Sahibzada oo ka hadlay Furitaankii Kal-fadhigii 39Aad ee Baarlamanka dawlada Puntland ayuu sheegay inay hay,adu waxbadan ka qabtay xarunta Baarlamanka Puntland isla markaana ay waddo dadaalo kale oo lagu hormarinayo Xarumaha Dawlada Puntland.
Masuulkan ayaa sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday inuu jiro mashruuc kale oo Bisha Jullay laga hirgalindoono Soomaaliya kaas oo dib u dayac tir lagu samaynayo Xarumaha dawlada Soomaaliya iyo Maamul goboleedyada dalka ka jira.
Waa markii ugu horaysa intii ka danbaysay Aas Aaskii Puntland 1998Dii dib u yactir lagu sameeyo xarunta Baarlamanka dawlada Puntland taas oo xiligan yeelatay waji ka duwan kii ay lahayd fadhigii hore ee Baarlamanka
Kursi casri ah iyo makarafoon uu ku hadlo xildhibaan walba ayaa loogu sameyey goobta uu ku qoranyahay magaciisa ee fadhiga baarlamanka halka markii hore xildhibaanada Puntland ay imaanayeen fagaaraha hore ee Baarlamanka hortiisa ah.
Wararka aan ka helayno Madaxtooyada dawlada Puntland ayaa sheegay inuu socdo qorshe lamid ah xarunta Baarlamanka isla markaana dhawaan dib u dayactir lagu samanayo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya iyo xafiisyada Madaxtooyada.
11 Mach 2017 ayaa gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka Puntland wuxuu kulan laqaatay Masuul ka socday UNDP kaas oo u matalayey ku xigeenka Madaxa UNDP Somalia Mr Devid Akapyaniyo iyo khabiirka dhinaca Baarlamanada ahna madaxa Mashruuca taageerada baarlamaanada Soomaliya ee UNDP Mrs. Kimberly Smidy.